Uhlelo lokuqeqesha ekhaya nokudla okusebenzayo - Indlela Makia
Indlela Makia: Iyini ukuqeqeshwa kokuphakama kokuphakama okuphezulu nokudla kwe-ketogenic?
I-Method Makia iyisicelo sokusebenzisa umsebenzi esasungulwa eFinland, esiye saba nomqondo ovelele ezweni lakubo eminyakeni embalwa. Uhlelo lunikeza uhlelo oluyinselelo lokuzivocavoca olungenziwa ekhaya noma e-gym. Ubunzima bokuzivocavoca kwandisa ngokuzenzakalelayo ngenkathi kuqeqeshwa. Indlela Makia ihlanganisa nokudla lapho izinkulungwane zabasebenzisi zithole isisindo esihle futhi zithuthukisa imikhuba yazo yokudla.
Umlando Wokudla Of Method Makia
Ngisebenzise yonke impilo yami, kodwa eminyakeni engaba ngu-35-40 ubudala umzimba wami waqala ukuqoqa amafutha - appraisal commercial estate real. Ushintsho lwenzekile ngokungacacile futhi olungabonakali. Isithombe esithathwe ngosuku oluhle lwehlobo olwandle sasenza amehlo ami avuleke.
Ngangiziqhenya kakhulu, kodwa ngemva kokubona isithombe engangiya kuso futhi ngabona ukumangala ukuthi isisindo sami sanda kakhulu. Ngangizibuza ukuthi yini engalungile.
Ngidla ukusabalala okunamafutha aphansi, i-yogurt enamafutha aphansi, ubisi olunamafutha, iziphuzo ezithambile ezinomsoco, ama-fat-fat, ama-imifino enokugqoka ama-salad aphansi, amaningi amaprotheni kanye nenyama ephilile kuphela. Ngombono wami, ngidla okunempilo, ngokusho kwemihlahlandlela jikelele. Kukhona okungalungile, okungalungile kabi.
Ngalinganisa amanani ami e-cholesterol, futhi ayengalungile. I-cholesterol embi yayiphakeme futhi okuhle kakhulu. Ngemva kokucela iseluleko, ngathola iziqondiso zendlela yokunciphisa amafutha ekudleni.
Ngingahlehlisa kanjani ukunciphisa amafutha kusuka ekudleni kwami? Ngaphezu kwalokho, umuntu owanginika iseluleko wayekhulu kakhulu ngokweqile kunami. Le ngxabano yazalwa.
Ngabe ngisebenza emsebenzini lapho ulwazi lomzimba lomzimba kubalulekile. Nginemfundo enhle nolwazi oluyisisekelo lokuxazulula le nkinga. Ngaqala ukuhlola kabanzi nakakhulu umzimba we-metabolism. Ngathola lapho umzimba usebenzisa ama-carbohydrate futhi uma ushisa amafutha. Ngaqaphela ngokushesha ukuthi i-carbohydrate ephezulu kanye nokudla okunamaprotheni aphezulu ngaphandle kwamafutha emvelo angayidlulisela umzimba embusweni lapho wonke amandla athola khona futhi ukushiswa kwamafutha kungakaze kwenzeke. Uma inani lamakholori avela ekudleni lisho kancane kakhulu futhi ukushiswa kwamafutha akukwenzeka, umphumela ukuzuza kwesisindo semvelo.
Ngazi kahle uDkt. Atkins ukudla. Kuyinto yokuphikisana okunomsoco nokungalungile, kodwa umqondo oyisisekelo uphelele. Ngalo, izigidi zabantu abakhulu ngokweqile emhlabeni wonke ziye zafinyelela esisindo esivamile. Umzimba uqhutshwa ukudla endaweni lapho cishe wonke amandla akhiqizwa ngamafutha. Umzimba usezindaweni eziqhubekayo zokushisa amafutha, futhi ukulahlekelwa isisindo kungcono ngisho nokuzila ukudla. Uhlelo luhlale luvutha amafutha alondoloziwe ngenkathi kuqinisekiswa ukuthi inani lamafutha namaprotheni ekudleni lanele. Ngaphezu kwalokho, kuqinisekisa ukuthi uthola izakhi zomzimba okwanele, lapho umzimba udala khona i-glucose.
Ngaqala ukudla kwe-Atkins, futhi imiphumela yayimangalisa. Kungakapheli izinyanga ezimbalwa, ngilahla amafutha amaningi kakhulu ayewatholile kancane. Ngilahlekelwa amapounds angu-33. Ngaphezu kwalokho, ngilahla ukushona ebusweni bami engangicabanga ukuthi kwakungenxa yokuphefumula engiyisebenzisayo emsebenzini wami. Ngaleso sikhathi, ngangiqala umzimba wami wokuqala wokuzivocavoca umzimba, futhi ngabona umphumela wabo ekwakheni isisindo somzimba.
Indlela Makia Ithola I-Spark Yokuqala
Abezindaba bakuthole konke ukugcoba eminyakeni embalwa eyedlule mayelana nezingozi zokudla kwe-Atkins ngoba udla kuphela ubhekeni, ibhotela, namaqanda. Abantu abaningi baqala i- "Atkins Diet" ngesisekelo sezinhlamvu ezincane zokwaziswa, okubangelwa ukuthi izitolo zaphuma ngaphandle kwebhotela. Ngaphandle kwesisekelo esihle solwazi, noma kunjalo, ukudla okune-ketogenic akuphumelelanga, futhi imiphumela imbi noma inhlekelele. Ukudla kwe-Atkins kuyisitogenic, futhi uma kulandelwa kahle, udla imifino eningi, inani elilinganiselwe lamaprotheni nokwanele kwamafutha amahle.
Nokho, ngokudla kukaMet Mak Makia ungadla cishe noma yikuphi ukudla okuhlanzekile, ngaphandle kwe-carbohydrates elula. Inani lemifino njalo liyingxenye yeplate, ngakho isabelo sabo sikhulu kakhulu kunokudla okujwayelekile.
Phakathi neminyaka ngenzile ukuzama ukuthuthukisa ukudla kwe-ketogenic. Ngenxa yomsebenzi wami, ngathola ithuba lokuthola izindinganiso zesikhathi sangempela zegazi lami. I-Method Makia Reboot iyinhlangano yakamuva yehlelo lwe-ketogenic lokulahlekelwa kwesisindo. Ivela endleleni ye-Atkins, kodwa inokuthuthukiswa okuphawulekayo okwenza amafutha ashise kakhulu nakakhulu.
Indlela yeMakia Yokuvuselela, ke-ke, ukudla okwesikhashana kwe-ketogenic ongakwazi ukulahlekelwa yisisindo. Njengoba usondela ngesisindo esihle, uzoya kuDethod Makia Basic Diet ephelele emndenini wonke.
Inkinga ngezinhlelo ezihlukahlukene zokulahlekelwa kwesisindo ngokuvamile iqukethe ukuthi othile emndenini udinga ukulungisa nokulinganisa ukudla kwakhe. Indlela yokudla eyisisekelo kaMakia yenzelwe ukuze wonke umndeni udle ukudla okufanayo. Uma ilungu lomndeni elithile lizama ukufinyelela esimweni se-ketogenic, uvele nje ushiye ingxenye ehlukile ye-carbohydrate. Uma kungenjalo, ukudla okufanayo kuwo wonke umuntu.
Iminyaka yokugcina ngiye ngathuthukisa isicelo seMet Makia net. Sekuyiminyaka ngilandela indlela efanayo yokudla okuyisisekelo uMet Makia, kodwa ekuqaleni kwalomsebenzi omkhulu, ngamabomu ngameza ama-carbohydrate alula njengama-buns, isinkwa esilula, amazambane, amaswidi, futhi ngashiya ukufakwa kwamafutha. Kodwa-ke, inzuzo yami yesisindo yaphuma esandleni futhi yavuka kusuka ku-183 amakhilogremu kuya ku-208. Amakhilogremu ayisithupha ngonyaka. Inhloso yami kwakuwukuhlola umsebenzi wakamuva wokudla we-ketogenic. Imiphumela ye-carbohydrate elula yayidlula kakhulu kunalindelekile, futhi ukulawula inani labo kwakunzima. Umphumela waba namandla kakhulu kunalokho engangikuhlosile.
01. 01. 2015 Ngaqala iMet Makia Ukuqalisa kabusha. Ezinyangeni ezimbili isisindo sami senyuke ku-176. 4 amakhilogremu, ngakho-ke inguqulo yami yakamuva yehlelo lokulahlekelwa kwesisindo iphumelela kakhulu. Okumangalisayo 32. Amakhilogremu amabili ezinyangeni ezimbili! Uzwakala kakhulu, kepha ngesikhathi sokulahlekelwa isisindo, angizange ngibe nendlala. Umzimba wami uhlale unamandla futhi ngangizizwa kangcono kunanini ngaphambili. Ngenza futhi iMet Makia ukuzivocavoca njalo. Phakathi nokudla kwe-ketogenic, abantu bangasebenzisa ngendlela evamile.
Ukuthola ulwazi kubalulekile ngaphambi kokuqala kabusha i-Method Makia Reboot. Iphakheji yolwazi lichaza wonke amaqiniso okudingayo ukuze uqale uhlelo oluphephile lokulahlekelwa kwesisindo. Uhlelo lwe-ketogenic lokulahlekelwa isisindo, lapho luqaliswa kahle, luphephile futhi lusebenza kahle. Noma kunjalo, ngaphandle kolwazi oluhle nolwazi lokuzibophezela, akufanele uqale.
Futhi, kuyaphawuleka ukuthi awudingi ukuqala ukudla okune-ketogenic uma unesisindo esivamile. Uma kunjalo, umzimba wakho usebenza kahle, futhi awudingi i-Method Makia Ukuqalisa kabusha, kodwa ukudla okuyisisekelo kunokwanela ukuvimbela isifiso samaswidi nokunciphisa imizwa yindlala.
Ekugcineni, ngizocaphuna omunye wabantu abahlakaniphile kunabo bonke, okushiwo ukuthi bekuyisimiso sami esiqondisayo ekulungiseleleni leli phasela lwazi.
"Uma ungeke ukwazi ukuchaza le ndaba ngokucacile, awukwazi ngokwanele ngakho. "
J. A. Needlehill, umsunguli weMet Makia